Tuugtii Ugu Casrisanayd Uguna Khatarta Badnayd Wax Ka Ogow..Qaybtii Labaad | Somaliland Today
← Hay’adda MSF Oo Caalaamka Ku Dhaliishay Jawaabta Laga Bixiyay Ebola
CAJIIB: Dilkii Loo Gaystay Labo Wiil Oo Madaw Ah Waxaa Loola Dan Lahaa Obama →
Tuugtii Ugu Casrisanayd Uguna Khatarta Badnayd Wax Ka Ogow..Qaybtii Labaad
(SLT-Hargaysa)-Bonnie iyo Clyde oo ahaa lamaane labaduba tuug ah oo caan ku ahaa danbiyo dhac loo geystay bangiyo,dilal iyo sidoo kale danbiyo farabadan ayaa iyagu ugu danbeyntii horseeday in uu soo gaabto cimrigooda iyada oo labaduba ay ku geeriyoodeen da’ aad u yar.
Labadan tuug ee lamaanaha ah ayaa si weyn caan ugu ah taariikhda dunida, iyaga oo in badan laga sameeyay qoraalo aad u farabadan waxaana xili hore oo sanadkii 1930kii ahayd la sii daayay sawiro muujinaya lamaanahan oo iyaga lagu xuso sida weyn ee ay isu jeclaayeen midba midka kale.
Waxay sawiradani muujinayeen lamaanahan oo qoslaya iyaga oo si kaftan ah isugu fiiqaya qoryahooda ka hor inta boolisku aanuu eryan oo aanuu ka reebin hubkii ay haysteen, waxay keliya la baxsadeen maryihii ay xidhnaayeen iyaga oo ka cararay waxkasta oo kale oo ay haysteen, sawiradan ayaa si weyn uga nixiyay ciidanka iyo sidoo kale dhamaan dadkii kale ee arkay.
Ma Barker oo nooleyd intii u dhexeysay sanadihii 1873kii-1935kii, waxa ay ahayd mid ka mid ah tuugta sida weyn dunida caanka kaga ahayd, sidoo kale waxay ahayd hooyo dhashay koox dhan oo budhcad ah kuwaas oo sameeyay koox budhcad ah oo iyada loogu magacdaray.
Sida ay sheegtay Hay’ada nabadgelyada gudaha ee Qaranka Maraykanka, gabadhan waxay ogeyd falalka ay caruurteedu ku jirtay iyada oo aan waxba ka odhan , waxaana ay masuuliyiinta FBI-du sheegeen in hooyada dhashay budhcadan oo saameyn weyn ku yeelatay nolosha dad badan aaney dooneynin in ay faragelin ku sameyso.
Ugu danbeyntii gabadhan ayaa waxaa toogasho ku dilay ciidanka FBI-da ee Maraykanka iyaga oo marmarsiiyo dilkeeda kaga dhigtay in ay dhiirigelineysay kooxaha budhcadka ah ee ay caruurteedu horkacaysay.
Dick Turpin waxa uu u dhashay dalka Ingiriiska isaga oo ka mid ah dadka taariikh ahaan sida weyn looga yaqaano dalka Ingiriiska , markii ugu horeysay waxa uu ahaa tuug keliya xada fardaha isaga oo markii danbe ku darsaday in uu ku kaco falal dil ah taas oo si weyn u cabsi gelisay dadkii noolaa xiligii uu ku hawlanaa falalka tuuganimo.
Francois Villon waa tuug Faransiis ah oo sidoo kale caan ku ahaa gabayo uu tirin jiray. Markasta oo uu wax xado waxa uu qaadi jiray gabayo si weyn ay u yaqaaneen dadka Faransiiska ku noola kuwaas oo inbadan oo ka mid ah ay si weyn ula dheceen.
Ninkan waxaa la cafiyay marar badan oo uu afkiisa isku furtay ,laakiin ugu danbeyntii waxaa lagu xukumay daldalaad oo uu markii danbe ka badbaaday isaga oo lagu xukumay 10 sano oo musaafuris ah , intaa wixii ka danbeeyay lama ogo meel uu jaan iyo cidhib dhigay ninkani.
Xigasho: Wargaysk Somalilandtoday